सन्दर्भ कोभिड १९ - Yohosamachar
September 3, 2020 September 3, 2020 योहो समाचार	0 Comments
नरवहादुर टन्डन अध्यक्ष, क्यानडा नेपाल पर्यटन संस्कृति तथा ब्यापार मंच
सँसार कोभिडको कारणले तनावग्रस्त छ । लाखौंलाख व्यक्तिको ज्यान गएको छ र अरबौं ग्रसित छन् । अझ कति समय जाने हो यसको कुनै टुँगो छैन । यस भाइरसबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सबै कामहरु थाती राखेर सरकार लागी परेको छ । जसको उदाहरण म क्यानाडाको दिन चाहान्छु । यहाँको तिनै तहको सरकारले विभिन्न विकासका गतिविधिका कार्यलाई स्थगित गरी आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रहन हरदम लागेको देख्दा आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेका छौं । नागरिकले पनि सरकारको नियम कानून पालना गरेका छन् । अझ खुसीको कुरा यहाँका संपूर्ण राष्ट्रिय पार्टीहरु आग्रह पूर्वाग्रह नराखी सबै यस कार्यमा जुटेका छन् । अझ अचम्म लाग्दो कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री, राज्य प्रमुखहरु समेत आफ्ना नागरिकको जानकारी लिएको देख्दा अनौठो लाग्छ । हर्ष विभोर भएका छौं । तर आफ्नो मातृभूमीमा भएको गतिविधि जनताको सास्ती देख्दा आफैलाई धिक्कार लाग्छ । यस्तो संक्रमणको बेला कुनै पनि राजनीतिक दल गोलबद्ध भएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा लाग्ने कि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने ? आश्चर्यको कुरा जनताको सुरक्षामा खट्ने कि नक्सामा अल्झने ? अझ अनौठो कुरा जनता भोकभोकै मरेका छन् । राम नेपाली हो भनेर के लफडा निकालिरहेको ? यस्ता कुरा त हामी सामान्य अवस्थामा रहेको बेलामा पो त निकाल्ने हो । राष्ट्रपतिको भूमिका खोइ ? हरेक राज्यमा गएर जनताको स्वास्थ्य बुझेर अभिभावकत्व लिन पर्दैन ? त्यो हेलिकप्टर केलाई ? माइता जानलाई ? अझ अर्को कुरा राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर बसेका भू. पू. प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत के गरेर बसेका छन् जनता भोकभोकै मरेका बेला? सीमा कुरा किन ? अहिलेसम्म कहाँ गएका थिए यस्ता कुरा ? यही बेला किन
← हाम्रो जीवन किन यति तनावग्रस्त ?
१० करोडको भेन्टिलेटर खरिदमा भ्रष्टाचारको आंशका ! →
Total Visit : 14225